Dn Daani’eel Kibrat hardha aangoo akka argatan dhageenye. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDn Daani’eel Kibrat hardha aangoo akka argatan dhageenye.
Aangoo biyya lafaa kanatti dhufuun isaa baayyee nu dhiphisuu baatus nu’i warra Ijoolleen Waaqayyoo afaan isaatin barachuu qaba jedhuun “Diina Biyya Itoophiyaa fi Mana Kiristaanati” jechuu isaa hin dagannu.
Namni kun Koree hundeessitoota MLO akka diina mana kiristaanatti lakkaawun isaa baay’ee nu gaddisiise. Sanummoo akka furmaatati wanti inni lafa kaahe “bederet megxem, abaaramuu qaban” kan jedhuudha. Gorsa isaa kanas Miseensotni Phaaphaasii Amaaraa tahan fudhachuun koree keenya abaarsise.
Dn Daani’eel Abbaa Aragaawii Monokseen jedhaman Afaan Oromootin waan faarfateef “Manaafiqiidha” jechuun abaaraa tureera.
Namni kun amantoota gara biroos arrabsuun jechuunis Maxxee, manaafiqii jechuun Kiristaanotni Ortodoksiifi amantootni gara biroof akka wal jibban nama hojjetaa tureedha.
Eegaa gara siyaasatti dhufuun isaa namni kun durumaanuu Siyaasa malee jecha Waaqayyoo nama beeku malee kan ittiin hin jiraanne tahuu hubanna. Dhugaadha Kitaabolee hedduu barreessus barreeffamniifi Tirriikttin isaa akka sabaatti ummata Oromoo kan xiqqeessaa ture akka tahe baruun salphaadha.
Amma eegaa aangoo mootummaa argateera, Koree MLO irratti waraana akkaamiit labsa kan jedhus suspense taanet eegaa jirra.
Waaqayyo oftuultota ni galabbaxa
Mana Lubummaa Oromiyaa የኦሮሚያ ቤተክህነት Oromia Clergy
Daniel Kibret and Mr. Meto are elected to get rid of the few Oromo voices in the media main target being OMN!
ዳንኤል ክብረት ከፓርላማው ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሞታል
በዛሬው የፓርላማ ውሎ ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት የቦርድ አባል እንዲሆኑ ከቀረቡት አባላት መካከል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ላይ ከፍተኛ ተቃውሞ ቀርቧል። በተቃውሞው መቅረብ ሳቢያ ለብቻው ጉዳያቸው ታይቶ ድምጽ እንዲሰጥ ከተደረገ በኋላ በ148 ድጋፍ በ126 ተቃውሞ እና 24 ድምጸ ተአቅቦ በአብላጫ ድምጽ የዲያቆን ዳንኤል የቦርድ አባልነት ፀድቋል።